Ụgbọ elu Turkish na Belavia agaghịzi efe ndị Iraq, Siria na Yemeni na-akwaga Belarus
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Turkish na Belavia agaghịzi efe ndị Iraq, Siria na Yemeni na-akwaga Belarus
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ Belarus • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News
Ụgbọ elu Turkish na Belavia agaghịzi efe ndị Iraq, Siria na Yemeni na-akwaga Belarus.
Dabere na mkpebi nke ndị ọchịchị Turkey tozuru oke, malite na Nọvemba 12, 2021, a gaghị anabata ụmụ amaala Iraq, Syria na Yemen ka ebufe ya n'ụgbọ elu si Turkey na Belarus.
Ụgbọ elu mba Belarus agaghị ekwe ka ndị Iraqi, Syria na Yemeni si Turkey banye Belarus.
Ụgbọ elu Turkish agaghị ere ndị bi na Iraq, Syria na Yemen tiketi ụgbọ elu Belarus.
European Union tinyere ọrụ maka nsogbu ndị na-akwaga mba ọzọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị ya na onye ọchịchị aka ike Belarusian Lukashenko.
N'okpuru iyi egwu nke mmachi ọzọ, onye na-ebu ọkọlọtọ mba Belarusian, Belavia, kwuputara na ọ kwụsịrị ịnakwere ụmụ amaala Iraq, Syria na Yemen na ụgbọ elu ya si Turkey na Belarus.
"Dịka mkpebi nke ndị ọchịchị Turkey tozuru etozu, malite na Nọvemba 12, 2021, a gaghị anabata ụmụ amaala Iraq, Syria na Yemen ka ebufe ya n'ụgbọ elu si Turkey na Belarus." Belavia nkwupụta ọrụ mgbasa ozi na-agụ.
Tupu mgbe ahụ, Turkish Airlines kwuputakwara na ọ gaghị ere tiketi maka ụgbọ elu Belarus nye ndị bi na Iraq, Syria na Yemen, n'ihi nsogbu mbata na-ezighi ezi na ókèala Belarusian-Polish.
A ga-ewepụ naanị maka ndị njem nwere paspọtụ diplomatic.
Ọgba aghara mbata na ókèala Belarus na Latvia, Lithuania na Poland, ebe ndị na-akwaga mba ọzọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị malitere ịbata kemgbe mmalite nke afọ a, batara na gia dị elu na Nọvemba 8.
Ọtụtụ puku mmadụ rutere n'ókè Poland n'akụkụ Belarus ma gbalịa ịbanye Poland. N'ịgbalị ịwaba oke ókèala ahụ, ha mebiri mgbidi waya gbachiri agbachi.
Mba European Union (EU) etinyela ọrụ maka ụma ịrị elu nke nsogbu ndị na-akwaga mba ọzọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị ya na Minsk na onye ọchịchị aka ike Belarusian Lukashenko, ma kpọọ oku maka mmachi ọzọ.